Ivule ebunzimeni iJunxion Mall ePhilippi | News24
Ivule ebunzimeni iJunxion Mall ePhilippi
Abahlali basePhilippi abebelugcwabevu ngumsindo bebefuna ungena ngenkani phakathi ezivenkileni.IMIFANEKISO: UNATHI OBOSE
Kulibaziseke ngosuku ukuvulwa kobhazabhaza wozoshishino omtsha wase Philippi, iJunxion Mall, emva kwengxubakaxaka yemisebenzi.
Lo bhazabhaza bekulindeleke ukuba uvule ngoLwesine weveki ephelileyo, kanti kunyanzeleke ukuba zinqunyanyiswe iinzame zokuvula emva kokuba iqela labahlali lityhole ngokubakho konyawo lwemfene kwindlela ekuqeshwe ngayo abasebenzi. Emva kothotho lweengxoxo phakathi kwabaphathi balo bhazabhaza kunye nabahlali uye wavula lo bhazabhaza ngoLwesihlanu.
Kutyholwa ngelithi amalungu ekomiti ebichophele ukuqeshwa kwabasebenzi ithe yanedolo kwindlela yayo yokuqesha, nto leyo ibangele isankxwe ekuhlaleni.
Usihlalo wombutho wezophuhliso ePhilippi uMonwabisi Mbaliswana uthe yonke into ibuyele esiqhelweni emva kokuba zibanjwe ngempumelelo iingxoxo.
Uthe oyena nobangela walo mbhodamo zizityholo ebezijoliswe kwikomiti ebithwaliswe uxanduva lokuqesha abasebenzi. Uthe ngokwengxelo yabahlali amalungu ale komiti athe aqesha abantu abahlobene nawo.
Umbaliswana wongeze ngelithi kuye kwavunyelwana ukuba ichithwe le komiti ukuze konyulwe entsha. “Siye safumanisa ukuba amanye amalungu alakomiti ebeqesha izihlobo zawo. Umzekelo, kwingingqi i-Section 1 kwa phaya ePhilippi, sifumanise ukuba le komiti ayivani nabanye babahlali baphaya kuba bekumbutho wezopolitiko othile baze ababandakanywa kwingqesho,” ucacise watsho.
U-Mbaliswana uthe zonke izicelo zomsebenzi zikumphathi weevekile nguye ozothi akhethe abantu abamaqeshwe encediswa ngalamalungu matsha ekomiti ukongeza kwabo sele beqeshiwe.
Uthe baye bathatha isigqibo sokuba babonelele nabanye abahlali abasuka kwingingqi ezimelene ne Philippi ngengqesho.
“Siye sagqiba ukubeni sivumele nabanye abantu abasuka kwiindawo ezinje ngeCrossroads kunye ne Nyanga East ukuba babenokusebenza nabo apha ngaphakathi,” wongeze ngelitshoyo uMbaliswana.
Omnye wamalungu ekomiti entsha omele wadi 34 uNosiphiwo Mdudu ungqinile ukuba zonke iivekile zivulile kwaye ziyasebenza kodwa wayibethelela into yokuba akukabikho nto icacayo malunga nokuqeshwa kwabanye abantu.
“Bonke abantu babiziwe ukuba bafake izicelo zabo zokusebenza kodwa akukabikho bantu batsha sele beqeshiwe,”ucacise watsho.
Woleke ngelithi urhanela ukuba babethwe ngemf’ iphindiwe kuba abaphathi beevenkile befuna zivule. “Qho sibizelwa entlanganisweni umphathi zivenkile kanye lo unezicelo zabantu zomsebenzi usoloko engekho. Nangoku ndithetha nawe nje ndilungiselela ukuya entlanganisweni ukuyomamela ukuba kuzoqhubeka ntoni na,” ugqibezele ngelitshoyo wongeza ngelithi uloyiko lwakhe kukuba abahlali basuke badikwe baye ngokwabo.